Akụkọ - South China Mma ngosi
South China Mma ngosi
Na-elekwasị anya na usoro mba ụwa, teknụzụ dị elu na usoro imewe, yana mkpa ọhụrụ nke ndị na-azụ ahịa ọgbọ ọhụrụ, South China International Beauty Fair ewepụtala ebe ngosi pụrụ iche dị ka smart beauty new retail, e-beauty, trend space, new brand. mpaghara, mpaghara IP ịma mma na ebe ndị ọzọ na-ekpo ọkụ dị ka ọgbọ Z, mkpọsa ọhụrụ, nkwalite oriri na IP gafere. Ihe ngosi a ga-enyere ndị na-arụ ọrụ aka igwu ohere nke ahịa azụmahịa mma B2B na Dawan District, gbasaa map azụmahịa, kwalite mmepụta ihe ọhụrụ, na ijikọ ọnụ mepụta oge ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ịma mma na mpaghara Dawan.
• Nyochaa ohere ahịa nke azụmahịa ịma mma B2B, gbasaa ngalaba azụmahịa
• Tinye aka n'ọgbọ mba ụwa, teknụzụ dị elu, usoro imewe, na ihe ọhụrụ chọrọ site n'ọgbọ ọhụrụ nke ndị na-azụ ahịa
• Gbakọta nnukwu akụrụngwa nke yinye ụlọ ọrụ ịma mma
• Nweta ntinye ohuru ohuru nke ulo oru ma kesaa ohere ahia ahia zuru uwa
Shanghai MEICET ga-esonye na South China Beauty Expo na Shenzhen Convention & Exhibition Center site na July 30 ruo August 1, 2020.
Ihe ngosi ịma mma ọkachamara nke mbụ na Greater Bay Area 2020.
Na ihe ngosi a, ndị na-ewu ewu Usoro MC88 Ngwaọrụ nyocha anụ ahụ na Igwe nyocha anụ ahụ ga-egosipụta.
Meicet Body Analyzer na-eji teknụzụ BIA, nsonaazụ gụnyere nyocha ihe mejupụtara ahụ TBW, IBW, BMI, WHP, nyocha ihe mejupụtara ahụ, nyocha oke ibu, Segmental Lean & Fat Analysis wdg, Ọ dị mfe, ngwa ngwa, ziri ezi. Ihe ngosi ọdabara bụ mgbatị ahụ / ụlọ ọgwụ / ebe nchekwa / ebe nlekọta anụ ahụ / Ụlọ Mmanya / Ụlọ nyocha anụ ahụ
Booth:3B07 anyị nọ ebe a na-echere gị.